FITSANGANAN’NY V.M.A.M na Vovonan’ny Mpiasa Antselika eto Mahajanga (le 16-12-2014) | Région Boeny
Nijoro ara-panjakana eto Mahajanga ny V.M.A.M. na Vovonan’ny Mpiasa Antselika eto Mahajanga ny Talata 16 Desambra 2014 tao amin’ny GTZ La Corniche Mahajanga rehefa nahazo ny fankatoavana sy nahafeno ny fepetra mifehy ny fikambanana araka ny lalàna lah. 60-133/03 Oktobra 1960.
Nandritra io fotoana io no nankatoavan’ireo mpikamban’ny V.M.A.M. maherin’ny zato ny Sata mifehy ny fikambanana sy ny Fitsipika anatiny ifampifehezan’izy ireo.
Nanamarika ny mahazava-dehibe ny fijoroan’ity Vovonana ity Rtoa Saidibary Adeline nisolotena ny Faritra Boeny. Nohamafisin’ Atoa Christian Ntsay, Tale avy ao amin’ny BIT (Bureau international du travail) na Birao iraisam-pirenena momba ny asa, fa eto amin’ny Faritra Boeny ihany no ahitana fikambanana toy ity eto Madagasikara. Ka vonona tanteraka ny BIT hanampy sy hanosika eo amin’ireo lalana tokony hizorana eo amin’ny fampandehanana ny fikambanana hoy izy.
Ny 94% n’ny mpiasa eto Madagasikara dia voasokajy ho mpiasa antselika avokoa noho ny tsy fahafenoan’izy ireo ny fepetran’ny fandraharahana eo anatrehan’ny fanjakana, toy ny karatra hetra sy statistika ohatra ho an’ny mpivarotra madinika, hoy Atoa Christian Ntsay. Ny 06 % ihany no mba mpiasa ara-dalàna izay kendrena ho tafakatra 20 na 25% amin’ny 2050. Nambarany fa raha eto Mahajanga fotsiny dia mahatratra 5.000.000 Ar isan’andro ny vola ampidirin’ireny mpiasa antselika ireny ao amin’ny kitambom-bolan’ny Kaominina.
Toe-karena tsy manara-drafitra no misy eto Madagasikara ka izay no mahatonga ny BIT hanosika tanteraka ny V.M.A.M. mba hampiditra ireo sokajin’asa fito misy ao dia ny Varotra, ny Tao-zavatra sy Asa tanana, ny Fiompiana sy Fambolena ary Jono, ny Fitanterana sy ny Asa madinika, ho ao anatin’ny ara-dalàna tanteraka satria ianareo no fototra iaingana hametrahana izany. Hoy hatrany Atoa Christian Ntsay.
Tsy manao politika ary mivelatra amin’ny maha-olona ny V.M.A.M. Fampiofanana sy fanampiana eo ara-tsosialy, fijerena ifotony ny olana izay misy eo amin’ny mpikambana sy ny Fanjakana eto an-toerana ka hitadiavana vahaolana sy soso-kevitra. Ireo no laharam-pahamehan’ny Filohany, Atoa Zafisoa.
Isan’ny vy nahitana ny V.M.A.M. ny SEKRIMA na Sendikan’ny kristianina malagasy izay manana solotena eto Mahajanga.
Tonga dia hiasa ny Biraon’ny V.M.A.M. hoy ny ao amin’ny BIT, satria na dia efa tapitra aza ny fe-potoam-piaraha-miasan’ny Fanjakana Malagasy sy ny BIT dia nanome toky avy hatrany ny solotenany fa ho tohizany izany ao anatin’ny telo volana voalohan’ny 2015.